Home5– Sharemae
ရက်စက်လိုက်တာ မော်လမြိုင်မြို့ ကြားအင်းကျေးရွာတွင် ဖခင်ဖြစ်သူမှ သားမယားပြုကျင့်ရာ (၁၃)နှစ်သမီးတွင် ကိုယ်ဝန်ရရှိ။မော်လမြိုင်မြို့ ကြားအင်းကျေးရွာ မြောက်ခရွန်းရပ်နေ မ——-(၁၃)နှစ်၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ သတ္တမတန်း သည် ငှင်း၏ အကိုဖြစ်သူ နေထိုင်သည့် တောင်ခ ရွန်းရပ် ကြာအင်းကျေးရွာသို့ ဖေဖဝါရီ(၄)ရက်နေ့တွင်အလည်...
မင်းရဲ့လက်ရှိRSနဲ့ပက်သက်ပြီး သံသယဖြစ်နေတာတွေရှိလား။ သင့်အပေါ်မှာ သင်ရည်းစား ဒါမှမဟုတ် ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ ခံစားချက်ကစစ်မှန်မမှန်ရောသိချင်လား? ဒါမှမဟုတ်ဆက်ဆံရေးတစ်ခု မျှမျှတတ ဆက်ဆံရေးမဟုတ်ဘူးလို့ခံစားနေရလား? ကံမကောင်းစွာပဲ အားနည်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် မမျှတတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆို ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကသင့်ရည်းစား ဒါမှမဟုတ် ခင်ပွန်းက သင့်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိပဲဖြစ်စေ...
ကြင်စဦးဇနီးမောင်နှံတွေအနေနဲ့ မကြာခဏ လိင်ဆက်ဆံမှုပြုတာ သဘာဝပဲဆိုပေမယ့် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပေါင်းသင်းနေထိုင်ပြီးတဲ့ စုံတွဲတွေမှာတော့ ညားကာစလောက်တော့ လက်ပွန်းတသီးနေတာမျိုး သိပ်မရှိတော့ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း ဇနီးမောင်နှံရယ်လို့ ဖြစ်လာတဲ့အခါ လုံးဝလိင်မှုကိစ္စကို ရှောင်တာမျိုးထက် အကြိမ်ရေ သတ်မှတ်ထားတာတော့ ပိုကောင်းပါတယ်။ ဘယ်နှစ်ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံတာက ပုံမှန်လဲ။ပြောကြတာကတော့...
တစ်ခေတ်တစ်ချိန်က အနုပညာလောကမှာရော သဘင်လောကမှာပါ နေရာရအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင်၊ လူရွှင်တော်ကြီးဦးဧရာကိုတော့ အားလုံးကသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ ပရိသတ်တွေတော်တော်များများကလည်း သူ့ရဲ့ဟာသ ပြက်လုံးတွေ၊ ပြောင်မြောက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ကြည့်ရှုခံစားရင်း ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ လူရွှင်တော်ကြီးဦးဧရာက အနုပညာအလုပ်တွေကို ရပ်နားလိုက်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။...
အိန္နိယနိုင်ငံမှအမျိုးသားတစ်ဦးဟမွေးဖွားပြီးမိနစ်ပိုင်းအကြာသေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့သူ၏သမီးငယ်လေးကိုမြုပ်နှံပေးဖို့အတွက်အုတ်ဂူမြေတူးရာမှ မြေကြီးထဲမှမာတောင့်နေသောအရာတစ်ခုကိုဂေါ်ပြားဖြင့်ရိုက်မိခဲ့ပါတယ်အဆိုပါအရာဟာမြေအိုးဖြစ်နေခဲ့ပြီး၎င်းမြေအိုးထဲမှာမှအသံတစ်ခုထွက်နေခဲ့ပါတယ်၎င်းမြေအိုးကိုရိုက်ခွဲပြီးနောက်မှာတော့ Hitesh Sirohi အမည်ရှိအဆိုပါအမျိုးသားဟာအဝတ်တွေနဲ့ရစ်ပတ်ထားပြီးအော်ဟစ်ငိုကြွေးနေခဲ့တဲ့ကလေးငယ်ကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်ကျွန်တော်သမီးလေးပြန်ပြီ းအသက်ရှင်လာခဲ့တယ်လို့ထင်မိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ တစ်ကယ့်အသံအစစ်ကမြေအိုးထဲကနေ ထွက်လာခဲ့တာပါဆိုပြီး Hitesh ကပြောပြသွားခဲ့ပါတယ် ။ Hiteshဟာကလေးငယ်ကိုဆေးရုံသို့ချက်ချင်းခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး ကလေးငယ်၏ဆေးကုသစရိတ်ကိုတော့ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲက ပေးချေပေးခဲ့ပါတယ်အဆိုပါကလေးငယ်၏အသက်မှာ 4ရက်သာရှိသေးပြီးသူမကို မကယ်ထုတ်မီ 4နာရီကနေ 6နာရီခန့်အထိမြေမြုပ်ခြင်းခံထားခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆရာဝန်များက ကလေးငယ်ကိုကုသပေးခဲ့ကြပြီးကလေးငယ်၏ကိုယ်အလေးချိန်မှာ2.4 ပေါင်သာရှိပြီးသူမဟာအော...
အိုးပြင်မဲ‌ကျေးရွာ မီးလောင်မှုအ‌ခြေအနေ မင်းဘူး၊(စကု)မြို့နယ်မနက်ဖန် အမြန်ဆုံးကူညီထောက်ပံ့ရန်အားလုံးသတင်ပို့ထားပြီအိမ်ခြေ ၅၀ ခန့် မီးလောင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်ရှိမီးလောင်မှုအခြေအနေပုံရိပ်တွေကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အိုးပြင်မဲ‌ကျေးရွာ မီးလောင်မှုအ‌ခြေအနေ မင်းဘူး၊(စကု)မြို့နယ်မနက်ဖန် အမြန်ဆုံးကူညီထောက်ပံ့ရန်အားလုံးသတင်ပို့ထားပြီအိမ်ခြေ ၅၀ ခန့် မီးလောင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်ရှိမီးလောင်မှုအခြေအနေပုံရိပ်တွေကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
နည်လမ်းမမှန်သော ဖြေရှင်းနည်းဖြင့် အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု့များ မြန်မာမြေပေါ်မှာရော
နည်လမ်းမမှန်သော ဖြေရှင်းနည်းဖြင့် အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု့များ မြန်မာမြေပေါ်မှာရော ကမ္ဘာ့မြေပေါ်မှာပါ အမြန်ကျဆုံးပါစေ။ တရားဝင်ကွာရှင်းထားတဲ့ခင်ပွန်းဟောင်းကမိဘအိမ်ကနေခြိမ်းခြောက်ခေါ်သွားပြီး(၂၆)ရပ်ကွက်တောင်ဒဂုံက ကားဘော်ဒီရုံတစ်ခုမှာဓာတ်ဆီလောင်းပြီးမီးရှို့ခြင်းခံရတဲ့သမီးလေးလွင်မာဦးကိုအေးချမ်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာလေးမှာ နာခိုပြီပေါ့ နှမငယ်…..။ဘဝ ဝဋ်ကြွေးတွေ ဒီဘဝမှာကျေပါစေ။ဧရာဝတီ အသံ/Ma Maw Maw နည်လမ်းမမှန်သော ဖြေရှင်းနည်းဖြင့် အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု့များ မြန်မာမြေပေါ်မှာရော ကမ္ဘာ့မြေပေါ်မှာပါ...
ဧ ရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့မှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက် ညပိုင်းက အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိ အမျိုးသားတစ်ဦး ကြိုးဆွဲချသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးက သိရပါတယ်။အမှတ် ၁ ရပ်ကွက် ထန်းကုန်းလေး ၃ လမ်းမှာနေထိုင်တဲ့ ဝေလင်းထွန်းဟာ...
ကျပ်သိန်းရာချီ လာဘ်ယူသူများကိုလည်း ထောင်ဒဏ်သုံး၊ လေးနှစ်ပင်ချသည့်အတွက် ၎င်းအမှုသည်၏ အပြစ်ဒဏ်က များသည်ဟု ဒုရဲအုပ်ကျော်နိုင်ဦး၏ရှေ့နေက ပြောသည်။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု စွပ်စွဲချက်များဖြင့် တရားရင်ဆိုင်နေရသည့် ရဲအရာအရှိတစ်ဦးအား ထောင်ဒဏ်လေးနှစ်ကျခံရန် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်က ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်တွင် အမိန့်ချလိုက်သည်...
ဝန်ထမ်းတွေအပေါ် မတရားနှိပ်စက်တဲ့ အလုပ်ရှင်တွေ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အမြောက်အများရှိပါတယ်။ အခုလည်း တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ဝန်ထမ်းအလုပ်သမားတွေအပေါ် မညှာမတာ နှိပ်စက်စေခိုင်း တဲ့လုပ်ရပ်က တကယ့်ကိုစိတ်ပျက်စရာ၊ ဒေါသထွက်စရာကောင်းပါတယ်။ တရုတ်ဆိုရှယ်ပေါ်တက်လာခဲ့တဲ့ ရုပ်သံဗွီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကြောင့် ဆိုရှယ်အသုံးပြုတွေကို ဒေါသ တကြီးပေါက်ကွဲစေခဲ့ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက အလုပ်ရှင်က...